Shirkii Wada-tashiga Muqdisho oo la soo Gaba-gabaynayo – Radio Daljir
Shirkii Wada-tashiga Muqdisho oo la soo Gaba-gabaynayo
Oktoobar 20, 2015 3:46 b 0
Talaado, Oktoobar 20, 2015 (Daljir) —Waxaa maanta lagu wadaa in la soo gaba gabeeyo shirka Madasha wada tashiga doorashooyinka sanadka 2016, kaasoo shalay furmay, waxaana la filayaa in maanta laga soo saaro war murtiyeed.
Madashan ayaa lagu sameeyey heshiis ay bishii hore wada gaareen madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya, waxaana kulankani ka qayb galaya madaxda dowladda federaalka, maamul goboleedyada, Golaha Wasiirada, Xildhibaanada Baarlamaanka, Beesha Caalamka iyo Ururada Bulshada rayidka.
Hannaanka wadatashiga oo ay dusha ka maamuleyso Madasha Wadatashiga Qaranka ayaa ka koobnaan doona wadatashiyo heerar kala duwan leh oo dhacaya bilaha October iyo November, waxaana barbar soconaya doodo ay yeelanayaan bulshada rayidka iyo hawlo dhinaca xiriirka iyo isgaarsiinta oo heer qaran ah.
Wada tashiyada heer gobol iyo doodaha ay yeelan doonaan bulshada rayidka ayaa marka ay soo dhamaadaan Madasha wadatashiga Qaran ay shir kama dambeys ah ku yeelan doonaan dhamaadka bisha December.
Shirka kama dambeysta ah ayaa waxaa lagu soo bandhigi doona hannaanka doorasho ee lagu heshiiyey ee loo arko in la adeegsan karo sannadka 2016-ka.
Somalida Australia oo Mudaharaad Dhigay
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Talado_20